Mamepu anotangisa Virtual Reality neIOS 11 [VIDEO] | IPhone nhau
Mamepu anotangisa Virtual Reality neIOS 11 [VIDEO]
Yechipiri Beta yeIOS 11 inoenderera ichitisiira nhau dziri kuwanikwa zvishoma nezvishoma sezvo Apple isina kana kumbotaura nezvavo mumharidzo yayo yeKeoteote. Imwe yadzo inobata iyo iOS 11 Mepu kunyorera uye inoshandisa iyo nyowani ARKit iyo Apple yakaisa mumaoko evanogadzira uye kuti yakawanda yakanaka nhau irikupa munguva pfupi yapfuura, ichive chimwe chezvinhu zvitsva zvine mukana kwazvo weiyi nyowani iOS 11.
Nechishandiso chitsva cheMepu, pese patinowana iyo Flyover sarudzo muguta, tinogona kushandisa kufamba kwe iPhone yedu kufamba. Tinogona kuenda kumberi, kumashure, kutendeuka, kurerekera kumusoro kana pasi uye maonero muMamepu achashanduka zvichienderana nekutenderera ikoko, sekunge tanga tichinongedza kamera. Tinokuratidza pavhidhiyo.
Iri basa nyowani rinoratidza kuti richiri muchikamu chekutanga chekuvandudza chine zvinhu zvakawanda zvekugadzirisa, asi rinonongedza mukana wekuti neIOS 11. tinogona kumira mumugwagwa uye tichinongedza nekamera yedu tinogona kuona kuti tingaenda sei kune imwe nzvimbo kana kune iyo poindi yekufarira yatiri kutsvaga iri. Hatizive zvimwe zvakawanda nekuti sekutaura kwedu Apple haina kutaura nezvayo, asi tichifunga mashandisiro matsva eAugmented Reality ari kugadzirwa uye kugona kweinotevera iPhone 8 iri basa nyowani rine mikana yakawanda.
Muvhidhiyo iwe unogona kuona kuti maanimation acho sei dzimwe nguva asiri akanyorova, kunyangwe ichifanira kutariswa kuti iyo iPhone iri mukutora zvakare yayo skrini. Vamwe vashandisi vari kuyedza Beta vanovimbisa kuti mumadhigiramu ekare haashande zvakanaka kana sarudzo iyi haioneke zvakananga., saka zvarinoda zvinogona kunge zvakakwirira uye chete mahedheni emazuva ano anogona kuishandisa. Tichafanirwa kumirira kuti ive yakabwinyiswa mune inotevera Betas kuti tinyatsoona kuti ichi chiiko chiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Mamepu anotangisa Virtual Reality neIOS 11 [VIDEO]
Sarudzo yacho yakanaka, asi pandinoenda panzendo ndinoshandisa mamapu eGoogle, ine iphone yaisazosvika, inokundikana, handizive nekukasira kana ndiri kufamba nenzira chaiyo, museve hauratidze mafambiro andiri kutora zvakanaka uye neiyo google kana Dai zvaive nekuda kweiyo iPhone, ini ndaisazosvika kuhotera kana chero saiti, ini ndinogara ndichifanira kushandisa mepu dzeGoogle.
Sarudzo yekuisa iwo mafoto kana isu tikarongedza iyo iPhone haichawanikwe muGoogle Mifananidzo